Batariga iPhone Bararmay Maxaan sameeyaa? | Wararka IPhone
Mid ka mid ah cilladaha ugu caansan ee ku dhaca baytariyada lithium-ion ayaa ah inay bararaan illaa heer ay si macno leh u qarxiyaan shaashadda shaashadda. Tani waa sida saxda waxay igu dhacday goor dhaweyd iPhone X oo la iibsaday bishii Nofeembar 2017, Waxaan joognaa 2020 sidaa darteed damaanad qaadku ma daboolayo dayactirka.
Isla halkan markan su'aashu waxay soo ifbaxaysaa: ma hagaajisaa naftaada ama ma u geysaa adeeg farsamo? Labada xaaladoodba hal shay waa inay noqotaa mid cad, maalmahan batariyadu qaali maaha oo si toos ah Apple SAT iyadoo kuxiran qaabka wuxuu ku kala duwanaan karaa 55 iyo 75 euro. Taladaydu (waad samayn kartaa wax alla wixii aad rabto) ayaa ah inaad toos ugu geyso Apple ama dukaan ay xaqiijisay shirkadda Cupertino dayactirka noocan ah.
Sida loo beddelo batariga Apple Watch
Dareenkaan, waxaa jira isticmaaleyaal badan oo laga yaabo inay u arkaan adeegga batteriga qaali runtiina maahan wax dhib badan in la beddelo, laakiin waxay noqon kartaa khatar haddii aan si shil ah u daloolino batarigaan bararsan Dukaanka rasmiga ah ee Apple Store kuma fuliyaan shaqada dayactirka noocan ah qalabkana waxaa loo diraa xarun gaar ah si looga fogaado dhibaatooyinka. Haddii ay dhacdo in batterigu si fudud u dhammaado, waxay tan ku beddelayaan dukaanka, laakiin haddii ay jiraan baytariyada oo barara ma jiro wax ikhtiyaar ah oo sidaas lagu sameeyo, dibedda ayaa loo diraa.
Sidaan u idhi qiimaha bateriga aan rasmiga ahayn haysto iyo qiimaha ay ku baxdo dayactirka dukaanka Apple, talada iyo waxa ay tahay inaan samayno waa inaan u geyno dukaanka si looga fogaado dhibaatooyinka. Haddii ay dhacdo inaadan had iyo jeer haysan dukaan kuu dhow Waxaad ku diri kartaa iPhone-ka adoo adeegsanaya adeegga Apple ee shabakadda, laakiin tani waxay ku kacaysaa 12 euro dheeraad ah taasi waa in lagu daraa 55 ama 75 euro. Noqo sida ay noqon karto, waxa ugu fiican ee macnahan ah ma aha in la khatar galiyo oo tanina waxay u qaadataa aaladda Apple Store - aniga shakhsiyan waan aaminsanahay - xulashada ugu fiican
Sug iPhone la'aan qiyaastii 14 maalmood ee ay qaadato in la dayactiro ama loo diro qalab kale oo dib loo hagaajiyay waa mid kale oo ka mid ah dhibaatooyinka la xiriira bararka batariga. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u helo xalka iPhone X-ga waan la wadaagi doonaa, si aan u arko sida ay ku dhammaato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Batariga iPhone Bararmay Maxaan sameeyaa?
Isla waxbaa igu dhacay aniga iyo waqti isku mid ah. Waxay rabaan inay iga qaadaan batteriga iyo shaashadda, € 400 !!! Ma xaliyeen dhibaatada adiga?
Waxaan isticmaalay iPhone noloshayda oo dhan, sidaa darteed waxaan soo maray moodooyin badan waligayna igama dhicin in batterigu uu tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah leh ah u qaadanayo, iyadoo iPhone 11 aan adeegsanayo 7 bilood la isticmaalayo waxay ii sheegeen in ficil ahaan horeyba aysan u shaqeyn , way ii soo celiyeen, waxay ii sheegeen in dammaanad qaadku aanu khusayn isla markaana si fudud aanu u sii shaqeynaynin haddii ay furaanna ay si wada furan ii siin doonaan oo aysan jirin wax dacwad ah, sidaa darteed "xalka keliya" "Waxay i siiyeen waxay ahayd inaan bixiyay 70% wadarta qiimaha si ay ii siiyeen mid shaqeynaya, niyad jab aad u badan oo sumad ah oo aan raqiis aheyn gabi ahaanba taas oo nasiib daro aan haysto aalado dhowr ah 🙁
Ku jawaab Daniela
Dib u eegista Eve cam: asturnaanta, tayada muuqaalka iyo astaamaha amniga ee horumarsan